Enwere ike inwe oke ebili mmiri na Spain? | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ihe ndị a gbasara ihu igwe, ọ ga-abụrịrị na ịchọrọ ịma ma enwere ike ime nke a ụfọdụ F5 na-etolite gburugburu akụkụ ndị a, nri? Ọ ga-amagbu onwe ya ịhụ ụfọdụ, ọ bụrụhaala na e guzobere ya n’ebe ọ na-adịghị onye ọ bụla nọ na nsogbu.
Enwere ike inwe oke ebili mmiri na Spain? Ee n'ezie, mana ọ nweghị nke e jiri ya tụnyere ndị enwere ike ịhụ na US.
A maara United States, ọkachasị obodo Oklahoma, maka oke ihu igwe na-ada ebe ahụ, gụnyere oke mmiri ozuzo. Kwa afọ, a na-etolite ọtụtụ ndị na-ahapụ ndị dinta ihe ijuanya. Ha bụ ihe ndị mara mma, mana ha nwere ike ibibi, nke mere na ọ bụrụ na ị nwere ohere ịga ebe ndị ahụ, ị dịghị mkpa ịbịaru nso karịa 2km.
Na Spain oke ifufe anaghị agabiga ụdị F1. Ha na-emebi obere ihe mmebi, mana ọ nweghị oke njọ. Ugbu a, ọ ga - abụ ihe siri ike dịka nke dị na North America dị oke ala, mana ọ dị adị, dị ka Jerónimo Lorente, prọfesọ nke ihu igwe na Mahadum nke Barcelona si kwuo.
Foto - Ericksson
Otú ọ dị, n’ala anyị, a na-enwekarị ọtụtụ oge mmiri mmiri. Ha na-etolite na Mediterenian, n'okpuru ala nke igwe ojii cumuliform, ọkachasị mgbe ngwụsị oge ọkọchị. Ha nwere otutu njiri mara nke oke mmiri ozuzo, mana ihe di iche bu na olulu mmiri na ano n’ime oke osimiri, ma ifufe na-agba dị ala karịa (n'etiti 110 na 130km / h).
N'agbanyeghị nke ahụ, a hụwokwa oké ifufe nke na-emebi ihe na mbara ala ndị Spain, dị ka nke ahụ mere na March 1671 na Cádiz. A na-eme atụmatụ na ọ nwere ịdị ukwuu F4. Ọ bụ eziokwu na ọ dịla anya, ma ọ pụtaghị na ọ gaghị eme ọzọ.
Ọ ga-amasị m ịhụ nhazi nke oke ikuku F5, kedụ maka gị? Ma ọ dịkarịa ala ugbu a, anyị ga-edozi F1, yana mmiri mmiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Enwere ike inwe oke ebili mmiri na Spain?